Isibuyekezo se-Tusk Casino sase-Ningizimu Afrika- Kufika ku-R5,000 Ibhonasi Yokumukelwa!
Ikhaya / Amakhasino / isibuyekezo se-tusk casino
Isibuyekezo se-Tusk Casino
Isofthiwe:1x2gaming, Betsoft, Booming Games, Evolution Gaming, Evoplay
Ibhonasi Lokukwamukela:R300 Ama-No Deposit Bonus Amahhala
Enye kuhlu lwamakhasino e-inthanethi amasha emakethe yaseNingizimu Afrika, sithola ikhasino elinegama elizwakala ninamandla kakhulu i-Tusk Casino. Ake sibheke ezinye izici zale khasino entsha, ukuze ukwazi ukuzinqumela uma ufuna ukuyiyenza ibe ngenye yamakhasino akho ohamba kuyo kulo nyaka.
I-Tusk ngeye-Alt Exchange BV futhi iyiphethe futhi inelayisense futhi ilawulwa e-Dutch Caribbean territory of Curacao. Le ndawo igunyaza amakhasino e-inthanethi amaningi adlalwa ngabagembuli ku-inthanethi emhlabeni jikelele ngezindlela eziphephile zokudlala imidlalo ngaphesheya kwezilwandle.
I-Tusk Casino ayiwagayi amazwi ayo ngemiklamo yembali noma ukukhangisa okumanglisayo. Ikuyisa enhliziyweni ngobumnandi kusuka ekuqaleni. Futhi ubumnandi bukhona emidlalweni engamakhulu eyakha le khasino ye-inthanethi. I-Tusk isebenzisa ipulatifomu yesofthiwe yabadayisi abaningi, futhi lokho kusho izihloko zabanye babahlinzeki abahamba phambili ebhizinisini. Kusuka ku-NetEnt, kuye ku-Habanero; kusuka ku-SoftBet kuye ku-Evolution, uzothola imidlalo, izingqikithi, nemikhawulo yokubheja ukuze khasino ivumelane nabadlali abaningi. Imidlalo Yomdayisi Obukhoma ongayikhetha iyamangalisa.
Noma ngabe ukhetha ukudlala kuselula noma kudeskithophu, i-Tusk Casino isebenza kahle kuwo womabili amapulatifomu. Ukugembula uhamba, usebenzisa isikrini esincane akusho ukuthi udinga ukwehlisa ikhwalithi lokugembula.
I-Tusk Casino ibukeka futhi izwakala sengathi iseAfrika, kusuka emibaleni kuya ezithombeni zezindlovu namabhubesi kuyo yonke isayithi. Kuyacaca ukuthi isayithi yenzelwe ukunikeza isipiliyoni saseAfrika , kodwa – nje iqiniso – iyatholakala kubadlali abavela emhlabeni wonke. Ngokusobala i-Rainbow Nation inendawo ekhethekile enhliziyweni yekhasino. Ake sibone ukuthi kungani i-Tusk Casino ithandwa abadlali baseNingizimu Afrika.
I-Tusk Casino Ningizimu Afrika
Abantu baseNingizimu Afrika bonakaliswe ngempela uma kuziwa ekukhetheni izinto zokuzijabulisa zasekhasino ye-inthanethi ezinekhwalithi ephezulu. Kusukela lapho amakhasino asezakhiweni aphoqeleka ukuvala iminyango yawo, noma okwesikhashana, ngesikhathi sobhadane lwe-Covid lwango-2020, abantu baseNingizimu Afrika baphendukela kwezinye izindlela zokugembula, futhi isidingo samakhasino e-inthanethi okuzijabulisa siphakeme.
I-Tusk Casino yasungulwa ngalesi sidingo, futhi singasho ngenjabulo ukuthi ihlangabezane nokulindelwe abadlali baseNingizimu Afrika.
Ngokusobala, ukubukeka njengeAfrika kanye nokusebenziseka kwesayithi yisici esihehayo, kodwa akuyona nje into eyenza i-Tusk ibe yikhasino edumile eNingizimu Afrika.
Kungenxa yokuthi isayithi isebenza engathi yenzelwe abantu baseNingizimu Afrika, kusukela izici ezisobala ezifana nesiNgisi njengolimi oluyinhloko olusetshenziswa kusayithi, kuye kuqiniso lokuthi inikeza amarandi njengendlela yokukhokhela izimali. Lokho kuyisici esikhulu, njengoba kunqamula isidingo sokukhokha imali yokudayiselana kwamazwe omhlaba nokubala izindleko zokuguqula imali.
Futhi uma iyamukela i-ZAR, i-Tusk Casino iyaqiniseka ukuthi izindlela zokubhenka kusayithi ziyaziwa ngabadlali baseNingizimu Afrika. Kafushane, zonke izinkinga zemali zixazulilwe, okushiyela wena isikhathi namandla okuchitha kulokhoko okubalulekile – njengezikhathi zakho zokudlala ku-inthanethi!
Sizokwandisa amabhonasi amahle namaphromoshini atholakala kubadlali baseNingizimu Afrika kuzigaba ngezansi, kodwa kwanele ukusho ukuthi ziyanelisa. Amabhonasi akhulisa amadiphozithi akho kakhulu futhi abeke imali eningi esikhwameni sakho oqala ngalo ukudlala.
I-Tusk Casino izama ngawo wonke amandla ayo uma kuziwa ekusizeni amakhasimende. Iziqhenya ngosizo lwamakhasimende oluhle, olubandakanya ingxoxo ebukhoma, ukuze uthole izimpendulo zemibuzo yakho ngokushesha. Kuyaziwa ukuthi ukuphepha kwe-inthanethi kusebenza kahle kakhulu, ukuze imininingwane yakho ihlale iphephile.
Amakhodi Ebhonasi Yokukwamukela
Amabhonasi okukwamukela ngokuvamile avuza kakhulu, njengoba ayindlela yokuthi ikhasino ye-inthanethi ikuhehe. Ngezinye izikhathi lawa mabhonasi asebenza kumadiphozithi akho okuqala ambalwa ku-akhawunti yakho yemali yangempela, ezinye izikhathi, uwathola eyisamba ngesikhathi udiphozitha kokukuqala.
Ngenxa yebhonasi yokukwamukela yase-Tusk Casino, ungayiphinda kabili idiphozithi yakho yokuqala ize ifike ku-R5,000. Leyo yindlela yokubona isikhawama sakho sengezwa ngemali!
Ibhonasi yokukwamukela engu-100% isho ukuthi noma iyiphi imali oyidiphozitha kuqala izophindaphindwa ngokushesha yi-Tusk Casino, ize ifike ku-R5,000.
Imibandela nemigomo yale bhonasi imi kanje:
Udinga ukudiphozitha imali eqala ku-R50 ukuze uthole ibhonasi yokukwamukela.
Isamba esiphezulu ongasicela singu-R5,000.
Ibhonasi ingaphansi kwemibandela yezidingo zokubheja ukuze ukhiphe imali.
I-Tusk Casino Ikhodi Yediphozithi Engekho
Ingabe uzibuza ukuthi ingabe le kuyikhasino ye-inthanethi ekufanele yini futhi unqikaza ukufaka imali yangempela ngaphambi kokuthola ulwazi? Ngakho-ke iphromoshini yase-Tusk Casino Yediphozithi Engekho ikufanele. Ikhasino ye-inthanethi ikunikeza ibhonasi yamahhala yediphozithi engekho ka-R300 ngenkathi ubhalisa nesayithi futhi uqinisekise i-akhawunti yakho. Ukhumbule, AKUKHO mali yediphozithi edingekayo ukuthola le mali yamahhala yekhasino. Ibhonasi ingaphansi kwemibandela yezidingo zokubheja.
Sebenzisa ikhodi yebhonasi ethi PLY300Z ukuthatha le bhonasi.
Amanye Amaphromoshini Akhethekile Anikezwa yi-Tusk Casino
I-Tusk Casino iyafakazela ukuthi akufanele ube neminyaka eminingi ebhizinisini ukuba nohlu olugcwele lwamabhonasi abadlali bakho. Ukubheka kanye ikhasi lamaphromoshini kusayithi, uzobona ukuthi kukhona amanye amaphromoshini afanele zonke izinhlobo zabadlali.
Into eyodwa okufanele uyikhumbule, noma kunjalo: Ngaphandle KweBhonasi Yediphozithi Engekho Yamahhala, wonke amanye amabhonasi adinga ukuthi ube umdlali obhalisiwe kusayithi osesebenzise ibhonasi yokukwamukela futhi ofake idiphozithi ku-akhawunti yakhe.
Ake sibheke amanye amaphromoshini atholakalayo e-Tusk Casino.
Ibhonasi Yokudiphozitha Futhi
I-Tusk Casino ikholelwa ekubongeni abadlali bayo njalo uma bebuyela kusayithi. Iyiphi indlela engcono yokubabonga kunokubapha Ibhonasi Yokudiphozitha Futhi efinyelela ku-R3,000? Uzothola ibhonasi ka-20% kunani olidiphozithile, ize ifike ku-R3K, uma wenza idiphozithi eqala ku-R50. Njengawo wonke amanye amabhonasi e-Tusk Casino, le phromoshini ingaphansi kwemibandela yezidingo zokubheja.
Indlela engcono kakhulu yokuthola imidlalo emisha yama-slot ukusebenzisa ama-spin amahhala. Zama Ama-Spin Amahhala e-Tusk Casino aqinisekise ukwenza umamatheke. Phindela emuva ekhasini Lamaphromoshini njalo ukuze ubone ukuthi yimaphi amageyimu e-slot amasha noma adumile afakiwe bese uwazama wonke mahhala.
Uma umema umngane e-Tusk Casino, ungathola umvuzo omuhle. Kungenzeka ukuthi wenza imali eyengeziwe ngokushesha nje lapho umngane wakho ebhalisa futhi efaka idiphozithi yakhe yokuqala, efinyelela ku-R1,000!
Mema umngane e-Tusk Casino.
Lapho umngane wakho ebhalisa, thumela igama abalisebenzisayo kupulatifomu ku [email protected]
• Wena uhola ibhonasi ka-100% yenani umngane wakho ayidiphozitha kuqala.
• Idiphozithi yomngane wakho kufanele iqale ku-R50
Isamba esiphezulu ongasicela singu-R1,000.
I-Tusk Casino iyazi ukutotosa abadlali bayo abathembekile, futhi lokhu kuqala ngokuba yilungu lekilabhu ye-VIP. Iyindlela yokuqinisekisa ukuthi uthola isipiliyoni esingcono sokudlala kule sayithi! Ngemuva kokuthi abe umdlali oyi-VIP, okudingeka ukwenze unakekele isimo sakho, uzokwazi ukufinyelela ezinye izici ezinhle kubhizinisi.
Ukunakwa komphathi we-akhawunti
Amabhonasi angenamkhawulo nsuku zonke, masonto onke, zinyanga zonke
Imiklomelo yazo zonke izenzo ezenziwe esayithini.
Ukubuyiselwa kwekheshi, ibhonasi yokudiphizitha, amabhonasi okumema abanye nokunye okuningi.
Izipho ezinhle njalo ezinjengamaholide, izingcingo eziphathwayo, namanye amagajethi
Indlela Yokungena Ngemvume Nokubhalisa e-Tusk Casino
I-Tusk Casino ikholelwa ekugcineni izinto zilula futhi ziqondile, futhi lokho kuqala ngenqubo yokubhalisa. Isayithi ikunikeza inqubo yokubhalisa engenabuhlungu ukuze ukwazi ukuqala izinto ezibalulekile empilweni – njengokugembula ku-inthanethi!
Ngezansi, sichaza inqubo yokubhalisa ku-inthanethi engenankinga ukukusiza ukuthi ube yilungu le-Tusk Casino.
Yiya kuwebhusayithi ye-Tusk Casino ngekhompyutha yakho noma ngokusebenzisa isiphequluli sedivayisi yakho ephathekayo.
Thola inkinobho ephuzi YOKUBHALISA ekhoneni eliphezulu kwesokudla sekhasi lasekhaya le-Tusk Casino bese uyichofoza.
Uzoqala ukufaka imininingwane uma utshelwa.
Faka ikheli lakho le-imeyili, igama lakho lokuqala, nesibongo sakho bese ukhetha igama lokusebenzisa kusayithi elihlukile.
Khetha imali uzodlala ngayo. Abadlali baseNingizimu Afrika bangakwazi (futhi kufanele) ukukhetha i-ZAR.
Faka iphasiwedi yakho oyikhethile. Yiphinde. Khetha umbuzo wakho wokuphepha kumenyu (kodwa qiniseka ukuthi uyayazi impendulo!) – Faka izwe ohlala kulo, ubulili bakho, usuku lwakho lokuzalwa nedolobha lakho.
Faka ikheli lakho leposi, ikhodi yakho yeposi, kanye nenombolo yakho yocingo yaseNingizimu Afrika.
Chofoza uma ufuna ukubhalisela incwadi yezindaba yase-Tusk Casino ukuthola izibuyekezo mayelana nemidlalo emisha namaphromoshini.
Vumelana nemigomo nemibandela yesayithi ngokuchofoza ebhokisini.
Chofoza VULA I-AKHAWUNTI
I-Tusk Casino izokungenisa ngemvume ku-akhawunti yakho ngokuzenzakalela.
Usuyilungu langempela le-Tusk Casino. Zijabulise futhi sikufisela inhlanhla!
Imidlalo Yasekhasino Ye-inthanethi Ongayidlala e-Tusk Casino
Dlala I-Black Jack
Dlala Ama Slots
Uma sithi iqoqo lemidlalo e-Tusk Casino linemidlalo engaphezulu kwekhulu, asiqambi amanga. Kodwa empeleni ngeke ulindele okunye kukhasino ye-inthanethi enamaqembu amaningi abahlinzeki besofthiwe behlinzeka imidlalo yabo engcono. Singasho ngobuqotho ukuthi imidlalo ese-Tusk Casino ingakunikeza izinyanga zobumnandi, noma ungadlali umdlalo ofanayo kabili.
Sibale okungenani abahlinzeki abangu-20 kule sayithi yabadayisi – kusuka kumagama amakhulu ebhizinisini kuya kwabanye abadayisi abancane, abakhipha imidlalo kancane kepha esezingeni elifanayo nabancintisana nabo abakhulu.
Abahlinzeki bamageyimu abandakanya:
I-1 x 2 Gaming, i-Betsoft, i-Booming Games, i-Booonga, i-Evolution Gaming, i-EvoPlay, i-Felix Gaming, i-Fugaso, i-IronDog, i-Leap, i-Mr Slotty, i-Noble, i-Playson, i-Microgaming Quickfire, i-SA Gaming, i-Spinomenal, i-VIG, i-VivoGaming, i-Wazdan, i-Pragmatic Play, i-BetEnt, i-iSoftBet, i-Yggdrasil nabanye.
Indawo othola khona imidlalo ihlukaniswe ngokunengqondo ukuze ukwazi ukuthola izigaba eziyinhloko ngaphansi kwamathebhu az (ama-Slot, i-Virtual Sports, i-Roulette, i-Blackjack, i-Poker, i-Live Casino, i-Table Games, imidlalo emisha).
Ngaphakathi kwesigaba ngasinye, ungasesha amageyimu athile ngokufaka izihloko zawo, noma ungasesha amageyimu ngabadayisi abathile ngokuchofoza amagama abo kumenyu.
Ungakhetha ukudlala umdlalo ngamunye mahhala noma ngemali yangempela. Vele uthole umdlalo, hambisa i-mouse yakho phezulu kwesihloko sakho bese unikezwa ithuba loku DLALA NGEMPELA noma DLALA NJE.
Kukhona amakhulu emidlalo yama-slot e-Tusk Casino. Abadlali bazokwazi ukukhetha kusuka kumidlalo yakudala ethandwayo kakhulu kuye kumishini yezithelo emnandi, bese bangena emidlalweni emisha emakethe. Besingathanda ukubona isigaba esikhulu sama-slot sihlukaniswe ngezigatshana, mhlawumbe ngendikimba, ama-payline, ama-jackpot noma okunye. Usengasebenzisa injini yokusesha ukusesha ama-slot ngezihloko zazo nangomhlinzeki wesofthiwe yazo.
Zama i-NetEnt’s Super Striker, i-Twin Spin Deluxe noma ama-slot e-Invisible Man. Ama-slot e-iSoftBet maningi e-Tusk Casino, ahlanganisa izihloko ezifana ne-Fortune Pig, i-The Nutcracker ne-Western Gold Megaways. I-Betsoft Gaming’s Viiking Voyage noma i-Golden Owl of Athena? Noma zama i-Mr. Slotty’s fun Wild 7 Fruits noma i-Zeus the Thunderer.
Nakuba ama-slots ebusa ohlwini lemidlalweni, i-Tusk Casino ayikhohlwanga imidlalo yamakhadi neyetafula. Uzothola izinhlobo ezahlukile eziningi ze-Blackjack kanye ne-Roulette, kuwo wonke amazinga okubheja. Uma uthanda i-Blackjack ujabulele, zama isandla sakho ku-Blackjack VIP, i-Blackjack Super 7s Multihand, i-Blackjack Neo, i-Blackjack Multihand 3D ne-Premium Blackjack Hi Lo Gold.
Umdlalo wakudala we-Roulette uthola izici ezintsha uma udlalwa ku-inthanethi. Ezinye izinhlobo ezitholakalayo e-Tusk Zibandakanya: i-American Roulette, i-European Roulette, i-Premier Roulette, i-VIP Roulette, i-Speed ​​Auto, i-Roulette Grand Casino ne-Roulette Monopoly.
Zombili izinhlobo ze-poker yevidiyo zesandla esisodwa nezandla eziningi zingatholakala kule pulatifomu. Zama imidlalo evela kubadayisi abahlukahlukene ukuthola imidlalo oyithandayo ye-poker yevidiyo. Eminye yemidlalo yethu esiyithandayo: Yi-Texas Hold ‘em Poker, i-Tens or Better Progressive Poker, i-Pursuit Poker, i-Bowling Strike, i-Joker Poker, ne-VIP Deuces Wild Progressive.
Abanye abahlinzeki besofthiwe e-Tusk Casino baziwa kakhulu ngokuletha ubuchwepheshe babo mayelana nezemidlalo, yingakho ikhasino inesigaba esizinikele Kumidlalo Yedijithali. Sihlatshwe umxhwele kakhulu yimidlalo esheshayo evela ku-1 x 2 Gaming, enjenge-Instant Velodrome, i-Instant Trotting ne-Instant Speedway, kanye ne-Football Studio ka-Evolution Gaming.
Ingabe i-Tusk Casino Itholakala Kuselula?
I-Tusk Casino iyabona ukuthi abadlali abaningi baseNingizimu Afrika bakhetha ukudlala imidlalo yabo yasekhasino kumadivayisi eselula kulezi zinsuku. Ngakho-ke, ikhasino ingadlalwa ngokuphelele kuningi lamaselula namathebulethi, kubandaakanya amadivayisi e-iOS ne-Android, kanye ne-Windows Mobile ne-Blackberry.
Ayikho i-app ye-Tusk Casino, okusho ukuthi akukho ukudawuniloda okumele ukufake kudivayisi yakho futhi ayikho i-app ezodla isitoreji seselula yakho. Esikhundleni salokho, okudingayo yiselula enesiphequluli esibuyekeziwe njenge-Chrome, i-Safari noma i-Firefox futhi uzobe uphedukisa ama-reels e-Tusk Casino ngenkathi uhamba ngokushesha.
Kubalulekile ukuze uqiniseke ukuthi uyakwazi ukufinyelela ukuxhumana okuhle kwe-WiFi. Lokhu kwenzelwa ukuthi ukwazi ukudlala imidlalo yemali yangempela yeselula kusuka kudivayisi yakho. Ngokusobala, ukuxhumana kunethiwekhi ye-WiFi yindlela yokudlala engcono, kepha i-4G enenethiwekhi enhle izokusiza ukuthi udlale futhi.
Abanye abadlali bangabaza ukudlala imidlalo yasekhasino kumadivayisi abo eselula, ecabanga ukuthi izinga lekhwalithi liphansi. Lokhu kuyinganekwane nje, ikakhulukazi ngonyaka ka-2020. Abadayisi besofthiwe kade baqonda ukuthi imidlalo yekhasino kufanele idlalwe kuwo womabili amadeskithophu nakumadivayisi eselula, futhi ukukhetha i-Tusk Mobile Casino kukhombisa lokho nje. Izinguqulo ezisebenza ngesikrini sokuthinta zinezithonjana ezinkudlwana, umbhalo ohlelwe kabusha nokuhlelwa kwesayithi okusiza ube nesikhathi esihle sokudlala.
Okunye, akukho okuthola kunguqulo yekhompuyutha ye-Tusk Casino engatholakali kupulatifomu yamaselula. Sikhuluma ngamabhonasi afanayo, izindlela zokubhenka ezifanayo, izici zokuphepha nosizo lwamakhasimende
Ngingadawuniloda i-Tusk Casino Kuselula Yami?
Cha, ngoba asikho isidingo! Uthola konke ongakuthola ku-app esebenza bushelelezi, into nje ukuthi yiwebhusayithi yedeskithophu edlalwa kusiphequluli seselula. Akukho okudawunilodwayo, awekho ama-app, futhi akunazinkinga!
Izindlela Zokudiphozitha Nokukhipha Imali e-Task Casino
Imininingwane ye Task Casino evamile
Imininingwane Yekhasino Evamile
Usizo Lwamakhasimende Ekhasino
Isungulwe: 2020 Inombolo Yocingo Yamahhala Yase SA: Cha
Umphathi Ngu: Alt Bet Exchange B.V I-Imeyili: Ifomu elikusayithi
Uhlobo Ungaludawuniloda: Cha Usizo Lwe 24/7/365: Cha
Uhlobo Olungadingi Ukudawunilodwa: Yebo Iwebhusayithi: https://www.tuskcasino.com/
Ubuhle Nobubi be-Tusk Casino
Ilayisense ngeyasendawo eyazelwa ukugembula
Isayithi inabadayisi abaningi
Ungakhetha ama-slot amahle
Imidlalo ekhethekile Njengemidlalo Edijithali
Imidlalo yeselula emihle
Ibhonasi Yediphozithi Engekho
Asikho isigaba se-jackpot ekhula njalo
● Awukwazi ukushayela usizo lwamakhasimende ucingo
Yini Eyenza Abadlali Abaningi baseNingizimu Afrika Bakhethe i-Tusk Casino?
I-Tusk Casino isebenzisane nabanye abahlinzeki besofthiwe abasezingeni eliphezulu kakhulu ebhizinisini, ukulethela abadlali baseNingizimu Afrika ipulatifomu yokudlala enhle kakhulu ngaphansi kophahla olulodwa lwedijithali. Abantu baseNingizimu Afrika bayakwazi ukuzikhethela uma kuziwa ekukhetheni imidlalo emangalisayo e-Tusk Casino.
Lezi ngezinye zezizathu zokuthi kungani i-Tusk Casino iba yisayithi yokudlalela yabadlali bakuleli:
Amabhonasi Ediphozithi Engekho Namabhonasi Okukwamukela Amahle
I-ZAR iyasebenza ngokuphelele ● Izindlela zokubhenka ezisebenza kahle e-SA
Izikhalo nge-Tusk Casino Ningizimu Afrika
Njengawo wonke amakhasino asanda kufika kule mboni, i-Tusk Casino kusadingeka ukuthi izakhele igama layo kubadlali. Uma silalela lokho esakuzwa, nalokho esikubone ngokwethu kule sayithi, sineqiniso ukuthi i-Tusk Casino izozimisa ngokuqinile njengendawo ebalulekile kubadlali baseNingizimu Afrika nabanye abadlali. Asikezwa into embi mayelana nesayithi, nakuba, eqinisweni, kuhlala kunethuba lokuthuthukisa. Singathanda ukubona i-Tusk Casino iyengeza izindlela zokukhokha futhi mhlawumbe ingxenye ehlukile yemidlalo yama-jackpot, kodwa, njengezinto eziningi, le webhusayithi isakhiwa futhi siyazi nje ihamba ngendlela efanele.
Ngabe iTusk Casino isemthethweni eNingizimu Afrika?
Ngaphansi kwemithetho eqinile, awekho amakhasino e-inthanethi asemthethweni e-SA, ngenxa yokuthi ukuthi imithetho yamanje ayikuvumi ukugembula ku-inthanethi, ngaphandle kokubheja ezemidlalo. Kodwa-ke, i-Tusk Casino itholakala ngaphandle kwemingcele yeNingizimu Afrika futhi imiswe e-Curacao. Uhulumeni wase-SA ngokuvamile, akahlaseli izinkampani zekhasino ezingaphesheya kolwandle, futhi kungexa yalokho kungani lawa masayithi eheha abantu baseNingizimu Afrika bese ebanikeza zonke izici ukuthi kudingeka babe nesipiliyoni sokudlala esimangalisayo – kubandakanya i-Tusk Casino!
Ngikhipha Kanjani Imali KuTusk Casino?
Uma zingekho izidingo zokubheja ukuze ukhiphe imali kubhalansi ye-akhawunti yakho, ungacela ukukhipha imali oyiwine e-Tusk Casino. Mane ungene ku-akhawunti yakho, uye esigabeni sikakheshiya wasekhasino ye-inthanethi, ukhethe indlela oyikhethayo yokukhokha (ukukhipha) bese ufaka inani lemali ofisa ukulikhipha ku-akhawunti yakho.
Inqubo yokukhipha imali isiqalile manje. I-Tusk Casino izocubungula isicelo sakho kungakapheli usuku noma izinsuku ezimbili, futhi ngalesi sikhathi, kungadingeka ukuthi ulethe amanye amadokhumenti e-ID okuqinisekisa ukuphepha. Le yingxenye edingekayo yenqubo ukuze okuwinile kuhlale kuvikelekile.
Lapho ikhasino isiqinisekise ubuwena bakho, izimali zizokhishwa. Isikhathi esithathwa yimali ukufika ku-akhawunti yakho yasebhange kuncike endleleni yokukhokha ekhethiwe
Yini iTusk Casino?
Isungulwe ngo-2020 ukuhlangabezana nezidingo zokugembula ku-inthanethi ezisezingeni elipahkeme zabadlali base Ningizimu Afrika, iTusk Casino iyiplathifomu enhle yoku dlala ku inthanethi, engadlalwa futhi kunoma yiluphi uhlobo lwe siphequluli se selula noma ese-PC. I-Tusk Casino iyi Casino ye-inthanethi enelayisense, ene ma hhovisi eCurarcao. I-Tusk Casino iyatholakala ku badlali abavela emhlabeni wonke, yize yenze abantu base Ningizimu Afrika abantu bayo futhi isekela izinkokhelo ngamaRandi. Kunamkhula impela emidlalo ye khasino ongaykhetha e-Tusk Casino, engadlalelwa imali yangemplea noma ukuzijabulisa.
Ubani umnikazi we Tusk Casino
Inelisinse yase-Curacao futhi ibhaliswe khona, I-Alt. Bet Exchange ingumnikazi nomphati we- Tusk Casino.
Ingabe I-Tusk Casino inezici zokubheja ezemidlalo?
cha, awukwazi ukubheja ezemidlalo ngoba azitholakali e-Tusk Casino. Uzothola ama-slot (amaningi awo anezindinkimba zemidlalo), kanye ne-poker yevidiyo, imidlalo yetafula kanye nemidlalo Yomdayisi bukhoma. Kukhona nesigaba semidlalo Edijithali yase khasino ethokozisayo esinendkimba yemidlalo.
Iphephe kangakanani i-Tusk Casino
Asinankinga nokucoma i-Tusk casino kumalungu ethu ngenxa yezizathu eziningana.
Le sayithi inelayisense ekhshwa ngabaphathi bezokugembula base Curacao
Unokufinyelela kumidlalo enalayisense futhi ehloliwe evela kubahlinzeki abahamba pahmbili.
I-Tusk Casino ivikelwe ngokusebenzisa i-SSL encryption.
Kutholakala izindlela zokukhokha ezethembekile kuphela ekhasino.
I-Tusk Casino ikhuthaza abadlali ukuthi bathole usizo uma bezwa ukuthi banenkinga yoku gembula.